Vula amathuluzi we-CAD, amathuluzi wokuhlela we-gvSIG - ama-Geofumadas
Vula amathuluzi we-CAD, amathuluzi wokuhlela we-gvSIG
NgoFebhuwari, 2011 I-AutoCAD-AutoDesk, I-GvSIG, Innovations, Ividiyo
Kwethulwe uchungechunge lwemisebenzi ethokozisayo, evela eminikelweni yeCartoLab neYunivesithi yaseLa Coruña. I-gvSIG EIEL ifaka izandiso ezahlukahlukene, eziwusizo kakhulu impela, zombili ekuphathweni komsebenzisi kusuka kusixhumi esibonakalayo se-gvSIG, amafomu wangokwezifiso nokuqinisekiswa okuzenzakalelayo.
Kodwa yini engibambelele ngayo yizikhangiso ezivulekile ze-CAD, okuyi-version yayo ye-0.2 kubonakala sengathi ithatha izicelo eziningi ezisuka emphakathini ukugxila futhi zithuthukise imizila yokwakha nokuhlela idatha.
Uma i-gvSIG inokuthile esithanda njengabasebenzisi be-GIS kungamathuluzi ayo okudala ngesitayela esivame ukukwenza nezinhlelo ze-CAD, inakho konke esikubuzayo ngezinhlelo ezikhethekile ze-GIS. Ukufaka lesi sandiso kungena esikhundleni se-extCAD ezenzakalelayo. Ibhukwana lomsebenzisi lichaza ukuthi ungafaka kanjani kuphela isandiso, ngoba futhi siza njengokuphumezekayo, noma kunguhlobo oludala lwe-gvSIG.
Imiyalo eyi-11 elandelayo iqoqiwe kunketho yokufaka: Iphoyinti, iMultipoint, i-Arc, i-Polyline, i-Multipolyline ,, iMultitask, i-Multipolygon, i-polygon ejwayelekile, i-Rectangle, i-Circle, i-Ellipse ne-Autopolygon.
Nakuba ukukhetha Lungisa 16 elandelayo liyayala: Kopisha, Mirror, Phenduka, Scale, Explode, Shift, Hlela vertex Engeza vertex, Susa vertex, Joyina, Redigitize umugqa Sika emgqeni Sika ipholigoni, Redigitize ipholigoni, ipholigoni zangaphakathi Nweba .
Ingqikithi ye-27, engikhumbula ngaphambili baye babheka i-21 uma uqhathanisa imiyalo ye-AutoCAD ngokumelene nalabo gvSIG 1.9.
Okubaluleke kakhulu mayelana nama-Open CAD Tools 0.2
Okokuqala, ngithola ukusebenza ukuthi i inkinobho yesokudla yegundane, uma umyalo usuqalisiwe, ungasebenza njengo "hlehlisa ". Kubonakala kunengqondo kimi, ngoba lapho udweba i-geometry, ngokwesibonelo i-polyline noma i-polygon, kujwayelekile ukwenza iphutha lapho ubeka iphuzu; esikhundleni sokukhansela umsebenzi owenziwe, noma ukuqhubeka nokuhlela ngokuhamba kwesikhathi ...
inkinobho yangakwesokudla, futhi iphuzu lokugcina elibekiwe lisuliwe
Futhi, kunezinye izihluthulelo ezisiza ngomsebenzi, njengekhi "ithebhu", ekuvumela ukuthi uzulazule entweni elandelayo. Kwenzeka, ngokwesibonelo, lapho sihlela i-geometry eyinkimbinkimbi, efana ne-polygon enezimbobo, noma ama-polylines amaningi.
ukhiye wethebhu, futhi usithatha geometry elandelayo
Khona-ke kukhona ibha yesikhala ukuqedela umsebenzi kanye no incwadi C ukukhansela. Ngenkathi kukhona labo ababuza ngokusobala ukusetshenziswa kwekhibhodi okwamanje, njengezinqamuleli eziphakathi komyalo zisasebenza.
Imizila yokwenza kabusha umugqa ne-polygon ixazulula lo mkhawulo omkhulu lapho kugcinwa ama-geometri asevele enziwe. Yize okuningi kwalokhu kuza ne-gvSIG, ukwandiswa abakwenzile kumikhombandlela kuhle kakhulu, ngokwesibonelo, lapho ulayini noma i-polygon isikiwe, umyalezo ubuza ukuthi ngabe sifuna ukugcina ingxenye eyeqile.
Ngakho-ke ukufaka amathuluzi okuzenzakalelayo ngamathuluzi we-Open CAD kuyindlela esebenzayo. Ithuluzi kuphela elingatholakali umyalo we-Line, njengoba wenziwe ngomyalo we-Polyline, ukuqonda ukuthi kunengxenye eyodwa kuphela.
Okunye ukuthuthuka kukucushwa kwezakhiwo ze-snaps, ukuze kungathinti isivinini somshini. Kulokhu ungaguqula inani lama-geometri ukuze lihlaziywe, izingqimba futhi uma ukulandelwa kwenziwa kuphela kuma-vertices noma emaphethelweni.
Ngemuva kwalokho inketho yokusebenzisa i-NavTable ngokuzenzakalela lapho uqeda i-geometry. Ngalokhu, idatha ye-alphanumeric ingaqedwa kulayini ofanayo wenqubo yokukhiqiza. Yize ukugqama okukhulu kwalokhu, ukuthi ukuphothulwa kwe-geometry manje sekungumcimbi, ngakho-ke abahleli bezinhlelo bangenza eminye imisebenzi ehambisanayo:
Njengokubukezwa kwezingqungquthela zendawo,
Ukuphakamisa umkhankaso wokumemezela ushintsho ku-database nakuba izingqimba ze-vector zingekho ngaphansi kwendawo,
Noma umane wazise i-database ukuthi i-geometry ethile isivele ikhona futhi uqhubeke nokubika ubuqotho maqondana nedatha yamathebula. Njengoba kungaba njalo lapho ifayela selifakwe ekhompyutheni kepha ukwenziwa kwemephu kuhamba kancane.
Ngeke kumangaze ukubona lesi sandiso kunguqulo elandelayo ye-gvSIG, njengoba sikubonile nge-NavTable. Kubonakala kithi njengesibonelo esihle, ukuthi kanye ne Fonsagua zimelela imiphumela yomsebenzi iSisekelo esiye sakhula ekuthuthukiseni lokho kwendwangu yezimboni, enye yezinsika eziqinile zokusimama amapulatifomu e-Open Source.
Ukuze ulandele kule ndaba ngiphakamisa izixhumanisi ezilandelayo:
Futhi-ke le vidiyo izobona ukusetshenziswa kwe-EIEL endleleni yomgwaqo.
Thumela Previous«Langaphambilini I-Google Amadokhumenti manje ingafunda amafayela we-dxf
Post Next Inkambo yamahhala ye-gvSIGOkulandelayo »